टिपरले किचेर दिलिपको बिभत्स हत्या, हत्या आरोपमा क्रसर मालिक पक्राउ — onlinedabali.com
टिपरले किचेर दिलिपको बिभत्स हत्या, हत्या आरोपमा क्रसर मालिक पक्राउ
काठमाडौं । खोला उत्खननको विरोध गर्ने दिलिपलाई टिपरले किचेर हत्या गरिएको आरोपमा क्रसर मालिक पक्राउ परेका छन् ।
आज (शनिवार) विहानै क्रसर संचालक विपिन कुमार महतो पक्राउ परेका हुन् । शुक्रवार बिहानै मिथिला नगरपालिका ५ श्रीपुरका २४ वर्षिय दिलिप महतोलाई ना.७ ख.६४१३ नम्बरको टिपरले किचेर हत्या गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन् ।
उक्त क्षेत्रमा क्रसर संचालन गर्दै आएका चुरियामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्रका संचालक विपिन कुमार महतोले नै नियोजितरुपमा हत्या गरेको स्थानीयको आरोपपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको गरेको छ ।
अभियुक्तलाई पक्राउ गरेपनि मृतक दिलिपका परिवार र स्थानीय समेत प्रहरीप्रति सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । बिना मुचुल्का शव उठाएर पोस्ट मार्टमका लागि लगिएपछि स्थानीय प्रहरी र वडाध्यक्षप्रति पनि स्थानीय आक्रोसित छन् ।
चुरियामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालक विपिन महतोसहित स्थानीय प्रशासन र वडाध्यक्षसहितको हत्यामा संलग्नता रहेको परिवारजनले आरोप लगाउँदै आएका छन् । जसका कारण शवको पोस्ट मार्टमसमेत हुन सकेको छैन ।
मिथिला नगरपालिका ५ श्रीपुरका २४ वर्षिय दिलिप पढेलेखेका सचेत युवा थिए । भारतस्थित एक कलेजमा मेकानिकल इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययनरत उनी अन्तिम सेमेस्टरका विद्यार्थी थिए ।
परिवारको भरोसाको रुपमा रहेका उनी समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोका विरुद्ध बोल्न अघि सर्ने स्वभावका रहेका उनका आफन्तहरुले बताउ छन् ।
दिलिपको घर नजिकै रहेको खोलामा उत्खनन भइरहेको थियो । उनले पटकपटक त्यसको बिरोध गर्दै आइरहेका थिए । सचेत युवाको भूमिका निभाउदै खोला उत्खननको बिरोध गर्दै आइरहेका उनी रोडाबालुवा माफियाको निसानामा रहेका थिए ।
कलेज बिदामा घर आएका उनी क्रसर माफियाको आखाँको कसिंगर बने । दिलिपकी बहिनीले भक्तपुरपोस्टलाई बताए अनुसार क्रसर माफियाले बीचमा आए ढालिदिने पटक पटक धम्की दिंदै आए पनि उनी पछि हटेका थिएनन ।
उल्टै गाउलेलाई संगठित गर्दै खोला दोहनको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका थिए । शुक्रवार मर्निङवाक गएका समयमा महतोको टिपरले किचेर ज्यान गएको प्रहरीको भनाइ छ ।
तर स्थानीय र दिलिपका परिवारजन यो मान्न तयार छैनन् । दिलिपकी बहिनी लक्ष्मीले बताए अनुसार साथि प्रकाश यादवले खोलामा अवैध उत्खनन भैरहेको खबर गरेपछि दिलीप बिहान ४ बजे घरबाट खोला तर्फ गएका थिए ।
उनी घरबाट निस्केको २० मिनेटमै उनको हत्या भएको खबर गाउँ भर फैलिएको थियो । टिपरले किचेर दिलिपको बिभत्स हत्या गरिएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयले हत्यारालाई कारवाहीको माग गरेका छन् ।
पत्रकारलाई म्याक्सिम इन्टरनेशनल ट्रेडिङको सहयोग, अक्सिजन र बेडकभर हस्तान्तरण
नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै ९ भन्दा धेरैमा कोरोन संक्रमण पुष्टि, ५४ जनाको निधन
कोरोनाका ६६ हजारभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित, बाँकेमा थप १० जनाको ज्यान गयो
कोरोना कहरः आजबाट ५६ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी
कोरोना भाइरस संक्रमण र निधनमा नयाँ रेकर्डः ८ हजार ६५९ संक्रमित, ५८ जनाको निधन
प्रधानमन्त्री ओली संविधान र परम्परा मिच्दै अगाडि बढेको भन्दै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो
नेकपाले ३१ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा थप्यो, को को परे ?
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध हस्ताक्षरसहित ४२ सांसदद्वारा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ
सोमबार राति १२ बजेबाट आन्तरिक र २२ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए बैशाख २७ गतेपछि के हुन्छ ?
लुम्बिनी प्रदेशमा सोनामको पक्षमा बहुमत, सरकारले ढल्ने निश्चित भएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य
अल्पमतमा परेका शंकर पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त, के भन्छन् काँग्रेस–माओवादी ?
श्रमिक दिवसमा विप्लवको शुभकामनाः श्रमिकहरु उत्पादनको औजार मात्र होइनन, समृद्धिका स्रोत हुन्